“Ọtụtụ Ndị Kpọburu M Asị” | Baịbụl Na-Agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ọtụtụ Ndị Kpọburu M Asị”
Akụkọ Waldo Moya kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1978
ABỤ M ONYE: CHILI
NDỤ M BIRI: IME IHE IKE RIRI M AHỤ́
M toro na Santiego, bụ́ isi obodo mba Chili. N’ebe ahụ, e nwere ọtụtụ ndị na-aṅụ ọgwụ ike na ndị nọ n’òtù ọjọọ nakwa ndị na-eme mpụ. E gburu papa m mgbe m dị afọ ise. Mgbe e gbuchara ya, mama m na otu nwoke obi ọjọọ biweziri. Ọtụtụ mgbe, ọ na-akụ mụ na mama m ihe. Ihe o mere anyị n’oge ahụ ka na-enye m nsogbu n’obi.
Mgbe m na-eto, ihe ọjọọ m na-ahụ mere ka m malite ime ihe ike. M na-ege egwú na-ada oké ụda, na-aṅụ oké mmanya, na-aṅụkwa ọgwụ ọjọọ mgbe ụfọdụ. Mụ na ndị na-ere ọgwụ ọjọọ na-alụkarị ọgụ n’okporo ámá. E nwekwara ọtụtụ ugboro ha chọrọ igbu m. O nwere mgbe ndị òtù ọjọọ, bụ́ ndị anyị na ha na-adịghị ná mma, kwụrụ otu onye akpụ obi a ma ama ụgwọ ka o gbuo m. Mgbe ọ bịara igbu m, ọ mara m mma, mụ erie mbọ mbọ. O nwekwara mgbe ndị na-ere ọgwụ ọjọọ tụgidere m égbè n’isi, chọwa ịkwụgbu m.
N’afọ 1996, m hụrụ otu nwa agbọghọ aha ya bụ Carolina. Ihe ya masịrị m. N’ihi ya, m lụrụ ya n’afọ 1998. Mgbe anyị mụchara nwa anyị nwoke nke mbụ, ụjọ tụwara m na iwe ọkụ m na-ewe nwere ike ime ka m kpawa àgwà ka nwoke ahụ ya na mama m bi ma na-emesi ndị ezinụlọ m ike. Nke a mere ka m gaa ụlọ ọgwụ ka ndị dọkịta nyere m aka. Ha nyere m ọgwụ ma gwa m ihe ndị m ga na-eme. Ma, ihe na-ebenụ ka na-ebe. Obere ihe ka na-akpasu m iwe. Anaghị m ejiteli onwe m. Anwara m igbu onwe m otu ụbọchị ebe m na-achọ ihe m ga-eme ka m kwụsị imesi ndị ezinụlọ m ike. Ma ihe ọma meere m bụ na mbọ m gbara n’ụbọchị ahụ ka m gbuo onwe m enweghị isi.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ekweghị m na Chineke. Ma, m chọkwaranụ ikwere na Chineke. Nke a mere ka m bido ịga chọọchị. Ka nke a na-eme, Ndịàmà Jehova amalitela ịkụziri nwunye m Baịbụl. Ma, anaghị m achọ iji anya ahụ Ndịàmà Jehova. Ọtụtụ mgbe, m na-akpọ ha iyi. Ma, ebe ọ bụ na ha abụghị ndị okwu na ụka, ha na-eji olu ọma agwa m okwu, bụ́kwanụ ihe m na-atụghị anya na ha ga-eme.
Otu ụbọchị, nwunye m gwara m gụọ Abụ Ọma 83:18 na Baịbụl m. Amaokwu ahụ kwuru na aha Chineke bụ Jehova. O juru m anya ịhụ aha ahụ ebe ọ bụ na ihe a kụziiri m na chọọchị bụ na e nwere Chineke, ma a kụzirighị m banyere Jehova. Ná mmalite afọ 2000, mụ na Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl.
Ka m na-amụkwu Baịbụl, ahụ́ bịara ruo m ala mgbe m mụtara na Jehova bụ Chineke obiọma nke na-agbaghara mmehie. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru n’Ọpụpụ 34:6, 7, na Jehova bụ “Chineke nke na-eme ebere, na-emekwa amara, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, onye obiọma ya na eziokwu ya dị ukwuu, onye na-eme ka obiọma ya ruoro ọtụtụ puku ọgbọ, na-agbaghara njehie na mmebi iwu na mmehie.”
Ma, ọ dịrịghị m mfe ime ihe m na-amụta. M chekwara na mụ emekataghị kwụsị iwe iwe ọkụ. Ma, mgbe ọ bụla m were iwe ọkụ, nwunye m na-agwa m na m ga-akwụsịli ya, na obi ekwesịghị ịda m mbà. Ọ na-echetara m na Jehova na-ahụ mbọ niile m na-agba ka m kwụsị ya. Ọ bụ ume ọ na-agba m mere m ji na-agbalịsi ike ka m mee ihe dị Jehova mma n’agbanyeghị na m na-echekarị na enweghị m mmekwata.
Otu ụbọchị, Alejandro bụ́ onye na-akụziri m Baịbụl gwara m ka m gụọ Ndị Galeshia 5:22, 23. Ebe ahụ kwuru na “mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, njide onwe onye.” Alejandro gwara m na ihe ga-eme ka m mụta àgwà ndị ahụ bụ mmụọ nsọ Chineke, ọ bụghị ike nke onwe m. Ihe a ọ gwara m mere ka m gbanwee otú m si ele ihe anya.
M mechara gaa otu nnukwu mgbakọ Ndịàmà Jehova nwere. Otú e si hazie ihe niile nke ọma ná mgbakọ ahụ na otú ebe niile si dị ọcha nakwa otú onye ukwu na onye nta si nọrọ n’udo mere ka m mara na mụ ahụla ndị na-efe Chineke. (Jọn 13:34, 35) E mere m baptizim na Febụwarị 2001.
Jehova enyerela m aka, mụ akwụsị ime ihe ike ma ghọọ onye na-eme udo. Ọ dị m ka à ga-asị na e si n’olulu apịtị dọpụta m. Ọtụtụ ndị kpọburu m asị, ụta adịkwaranụghị ha. Ma ugbu a, obi eruola m ala n’ihi na mụ na nwunye m na ụmụ anyị nwoke abụọ na-efe Jehova.
O juru ndị mụ na ha na-akpabu na ndị ikwu m anya na ndụ m agbanweela. Nke a emeela ka ọtụtụ n’ime ha mụwa Baịbụl. M nyekwarala ndị ọzọ aka ka ha mara Jehova. Obi dị m ụtọ ịhụ otú ihe ha mụtara na Baịbụl si mee ka ndụ ha gbanweekwa.